Ọkachamara Semalt na-akọwa ụdị ụdị Intanet na Ụzọ Isi Zere Ha
Intanet bụ nnukwu akụnụba nye onye ọ bụla. Ọtụtụ ndị ọchụnta ego na-ebulie-commerce platform as the new marketing marketing. Na weebụ, enwere ohere na ohere na-enweghị nsọtụ maka mmalite ọ bụla - site wilson oculos. Nnukwu ụlọ ọrụ nwereweghaara ohere a wee mee ọtụtụ weebụsaịtị. Usoro ahia dị ka Search Engine Optimization na-enyere aka ọ bụla ntanetị mmalite mmalitema nwee ọdịdị. Ndị mmadụ na ụlọ ọrụ nwere ike ịchọta ụfọdụ uru zuru oke site na ọtụtụ nde ndị ụlọ ahịa na-eweta.
Otú ọ dị, dịka ndị mmadụ na-eche banyere ịmepụta weebụsaịtị, ndị omempụ na-ahụ maka ọnyà cyber dị ka ndị na-agba ọsọ nandị na-eme ihe nkiri na-eme ụdị aghụghọ nke ịntanetị. N'ihi ya, onye ọ bụla kwesịrị ịkpachara anya maka ụdị mpụ ndị a. Ha nwere ike wepuha nwere ego buru ibu, yana ime mpụ ndị ọzọ a na-achọghị na weebụ.
Andrew Dyhan, ọkachamara si Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, edepụtara ụfọdụ ụdị aghụghọ nke ịntanetị nke nwere ike iguzogide gị na ụzọ ndị ị nwere ike iji zere ha.
1. Ejighị ego aghụghọ kaadị
Ọtụtụ hackers lekwasịrị weebụsaịtị na ndị ọzọ na ịntanetị nyiwe maka kaadị akwụmụgwọ.Ịkwụ ụgwọ kaadị akwụmụgwọ nwere ike inye ndị omekome ohere iji nweta ọtụtụ nde ndị ahịa. Ọzọkwa, ha na-eresị kaadị akwụmụgwọ zuru ezu na netwọk na netwọkahịa dị ka ndị omempụ. Ọ dị mkpa ịkpachara anya maka usoro hacking dị ka SQL ịṅụ ọgwụ yana ụzọ ndị ọzọ nke scammers mebirinchekwa nke azụmahịa online..Ọzọkwa, ọ dị mkpa iji mara ndị ahịa gị na ụzọ ndị omempụ a ji eji ohi zuo ohima chekwaa kaadị akwụmụgwọ ha. Ọzọkwa, tinye ozi gbasara kaadị na saịtị ndị a tụkwasịrị obi.
2. Scams na ozi ịntanetị
Ozi ịntanetị na-enye ọhụụ dị nchebe maka ịme ndị na-eme ka scammers rute ha. Na ndị ọzọikpe ha, ha nwere ike imebi nkwụsị nke ndị na-eme ka ndị omempụ mee ka ọtụtụ mmadụ gbuo ọtụtụ puku dollar online. I kwesịrị izere ozi ịntanetị nke na-abịasite na isi mmalite. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ịnwere ike iji ụfọdụ nzacha spam dị elu nọ na ụfọdụ n'ime usoro email echekwara. Ihe dị otú ahụ dị mfenwere ike ichebe azụmahịa gị na azụmahịa gị site na mmetụta nke ịntanetị na ụdị ọgụ ndị ọzọ. Ị kwesịrị ịhapụ ebe nrụọrụ weebụ gị site na nke anakwa ụdị mwakpo ndị ọzọ.
Ụdị ụdị aghụghọ nke ịntanetị na-abanye n'ime ịnye ihe ọmụma naibe na adighi. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-agba afa spam nwere peeji nke phishing yana ụdị ndị ọzọ nwere ike ịbịaru. N'ọnọdụ ndị ọzọ,ndị spammers nwere ike itinye agbakwụnye nke nwere Trojans na email. Nje virus ndị a nwere ike ime ọtụtụ mmetụta na kọmputa dị iche iche dịka ihe nchọgharịhacking. Ha nwekwara ike iji usoro phishing iji duzie ndị mmadu ka ha buru ugwo ugwo uzo, nke nwere ike izuru ozi kaadị ego n'aka mpụ ndị ọzọ.
E nwere ụdị mmadụ dị iche iche n'Ịntanet. Dị ka ndị mmadụ na-eme ụdị nile bara urundị na-ebido ịntanetị, ndị ọzọ na-ebute ihe ọjọọ na-eme ụzọ nke imebi mpụ ha. Dịka ọmụmaatụ, ndị mmadụ na-enye ohere ịnyere ha akandị ọzọ na ebe nrụọrụ weebụ azụmahịa. N'aka nke ọzọ, hackers nwere ike mbanye anataghị ikike ma wepụ ego si ahịa nakwa dị ka eweta ala saịtị. Nke anduzi nwere ike inyere gị aka izere aghụghọ nke ịntanetị nke nwere ike iguzogide gị dị ka ego laundering. Nche nke ebe nrụọrụ weebụ gị na nke onye ahịa gịdị n'aka gị.